एमाले, माओवादी र नयाँ शक्तिबीच ६ बुँदे सहमति, चुनावमा तालमेल, लगतै पार्टी एकता :Live
अछाम क्षेत्र नं. १ बाट भिम रावललाई निर्विरोध सिफारिस
अछाम | नेकपा एमाले क्षेत्र नम्बर १ ले प्रतिनिधी सभा सदस्यका लागि जिल्ला कमिटीमा १ जनाको नाम निर्विरोध रुपमा सिफारिस गरेको छ । क्षेत्रिय कार्यालय साफेबगरमा बसेको बैठकले नेकपा एमाले केन्द्रिय कमिटी उ...
देउवाले ल्याए कठोर कदम , अव दाहाल र ओलीको सपना चक्नाचुर हुने
काठमाडौं । एमालेले कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्काउन हदैसम्मको क्रियाकलाप गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि कठोर कदम उठाउने तयारी गरेका छन् । एमालेसँग...
काठमाडौँ । आंशिक प्राध्यापक संघले आफूहरुलाई करार गर्न माग गर्दै आज माइतीघरमण्डलमा धर्ना दिएको छ । सात दिनदेखि संघका अध्यक्ष डा महेश गजुरेलले कीर्तिपुरस्थित त्रिविको मूल प्रवेशद्वारमा आमरण अनशन जारी र...
काठमाडौं क्षेत्र न.४ बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार भट्टराई
काठमाडौं । डा. राजन भट्टराईलाई काठमाडौं क्षेत्र न.४ बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ । एमालेले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भट्टराईलाई काठमाडौं ४ नम्बर क्षेत्रीय समन्वय कमिटीको सोमबारक...
म्याग्दीका राजनीतिक दलहरु संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीमा
बाबियाचौर, म्याग्दी । म्याग्दीमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरु आसन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । विसं २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन भएको म्याग्दीमा आगामी मंसिर १० गत...
। दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर गाउँपालिका–९, साविक गौरीशंकर गाउँपालिकाको सिमीगाउँमा झाडापखालाबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ । झाडापखालाबाट आइतबार सिमीगाउँका ७९ वर्षीय तेन्जी शेर्पाको मृत्यु भएको स्थानीय मिङ्म...
बर्दिया । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले बिहान १० बजेदेखि गुलरिया–११ लालपुरसहित आसपासका संवेदनशील क्षेत्रमा कफ्र्यु आदेश जारी गरेको छ । आइतबार साँझ लालपुरमा ताजिया र मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा स...
रौतहट । स्थानीय निर्वाचन पछि रौतहटमा श्रृंखलावद्धरुपमा हत्या सुरु भएको छ । पछिल्लो १२ दिनमा चारजनाको हत्या भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ । शनिवार राति वृन्दाबन नगरपालिका–५ स्थित नेपाली काँग्रेस र एमाले क...
अर्काकी श्रीमतीलाई नुहाउने बेलामा हेरेको निहुँमा ६ वर्षे बालकको हत्या !
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा एउटा अनौठो तथा दर्दनाक घटना भएको छ । ६ वर्षका एक बालकको हत्या भएको छ । अनि उक्त हत्याकाण्डमा एक १९ वर्षे युवक पक्राउ परेका छन् । हत्याको कारण निकै अनौठो खालको छ । अर्काकी...
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ज्येष्ठ नागरिकलाई मर्यादित एवं सम्मानित गर्दै उनीहरुको अनुभवको अनुकरण गर्न सबैसँग आह्वान गरेकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा आइतबार शुभ...
काठमाडौँ । श्री ५ पृथ्वी वीरविक्रम (राजा त्रिभुवनका पिता) राजा हुँदा राममणि आदी (आचार्य दीक्षित) संवत् १९६६ कात्तिक ४ गतेदेखि राजदरबारको सेवामा प्रवेश गरेका थिए । सुल्टोलाई उल्टो र उल्टो कुरालाई सुल्...
निर्वाचनपछि आपराधिक घटनामा वृद्धि, फेरि एकको हत्या
रौतहट। दुईदशक पश्चात् भएको स्थानीय निर्वाचनसँगै रौतहटमा आपराधिक घटनामा वृद्धि भएको छ । बिहीबार राति फेरि एकजनाको हत्या भएको छ । यो घटनासँगै निर्वाचनयता जिल्लामा हत्या हुनेको संख्या तीन पुगेको छ । मौल...
मुम्बईको एक रेल स्टेशनमा भागदौड हुदा १५ जनाको ज्यान गयो, अरु दर्जनौँ घाइते
मुम्बई, नयाँ दिल्ली । भारतको आर्थिक राजनीति मानिएको सहर मुम्बईमा शुक्रबार बिहान अकस्मात भागदौड मच्चिएपछि त्यसमा परी कम्तीमा पनि १५जनाको ज्यान गएको समाचार छ । उक्त भागदौडमा परी अरु दर्जनौँ व्यक्ति घ...
दाङमा एक व्यक्ति मृत फेला
दाङ । दाङको रामपुरमा आज एक व्यक्ति मृत फेला परेका छन् । अन्दाजी २८ वर्षीय मानबहादुर खत्री मृत फेला परेका हुन् । मृतकको ठेगाना खुल्न सकेको छैन । घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीको एक टोली घटनास्थलतर्फ ग...
तेह्रथुम । कोया खोलामा रहेको पुल जीर्ण भएपछि तेह्रथुमको थोक्लुङ र इसिवुका बासिन्दा जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य रहेका छन् । आठराई गाउँपालिका–७, थोक्लुङ र फेदाप गाउँपालिका–५, इसिवुको सीमास्थित कोयाखो...
महेन्द्रनगर, धनुषा । जनकपुरको प्रमुख शक्तिपीठ राजदेवी मन्दिरमा गए राति १२ हजार ३०७ बोकाको बलि दिइएको छ । राति ८ : १९ मिनेटमा शुरु भएको बलिको कार्यक्रम ३ बजेर २१ मिनेटसम्म चलेको थियो । गत साल मन्दिरमा...
अर्घाखाँची । आगामी मंसिर २१ गते हुने संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि काँग्रेसले उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ । काँग्रेसका दुई वटै निर्वाचन क्षेत्रीय समितिको बैठकले संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनका...
रु ७१ हजारसहित पाँच जुवाडे पक्राउ
पोखरा । इलाका प्रहरी कार्यालय शिशुवाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले रु ७१ हजार ५५, चार थान ताससहित पाँच जुवाडेलाई बिहीबार पक्राउ गरेको छ । जुवा खेलेको सुराकीका आधारमा गएको टोलीले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–३...